औजार र जुत्ता उद्योगी बनाउने ? – Nepal Japan
नेपाली समय : 01:06:43
जापानी समय : 04:21:43
Tag: औजार र जुत्ता उद्योगी बनाउने ?
यिनीहरुलाई दलित भनेर राजनीति गरिरहने कि गार्मेन्ट, औजार र जुत्ता उद्योगी बनाउने ?
Posted on December 9, 2018 January 2, 2019 by Yadav Devkota
आज मुलुकमा एउटा नारा खुब घन्केको छ– “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” । अनि यो नारा सफल पार्ने आधारहरु भने के हो पत्तै छैन शासक, प्रशासक, नीति निर्माता, योजनाविद् र कार्यान्वयनकर्तासंग ।
खासमा अहिले दलित भनिने यी जात विशेषमा वंशाणुगत गुण र सीप, श्रम तथा अन्य मानवीय प्रतिभाको दृष्टिमा उच्चकोटीका छन् । यिनीहरूमा केही कमी थिएन, कलाका धनी थिए । सीप र जाँगर तथा स्वाभिमानी र स्वावलम्बी थिए । तर नेपालको बहुआयामिक यस्तो विशेषतामा पश्चिमा रणनीतिको ग्रहण लाग्यो । उनीहरूको जीवनशैली तथा संस्कार र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण हुनाका साथै उनीहरूका जीवनधारका सवै क्षेत्र र साधन खोसियो ।
Posted in बिचारTagged औजार र जुत्ता उद्योगी बनाउने ?, यिनीहरुलाई दलित भनेर राजनीति गरिरहने कि गार्मेन्ट